သတင်း - ကြက်မွေးမြူနည်း
ကြက်လှောင်အိမ်သည် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းကာ နေရောင်လုံလောက်စွာရနိုင်သောနေရာ၊ သွားလာရေးအဆင်ပြေကာ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် ဆည်မြောင်းများ အဆင်ပြေသောနေရာတွင် ဆောက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကြက်လှောင်အိမ်တွင် အစာကျင်းများ၊ ရေလှောင်ကန်များ၊ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။အစာကျွေးခြင်း။ ကြက်များ၏ အပူချိန်- ကြက်များ၏ အသက်အရွယ်အလိုက် အပူချိန်ကို ချိန်ညှိသင့်သည်။ ကြက်ငယ်များ မွေးမြူခြင်း- အထီးအမ ခွဲခြား၍ နေ့စဉ်ထိန်းပါ။အစာကျွေးခြင်း။ အသက်အရွယ်အလိုက် ပမာဏ။ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း- ကြက်အိမ်၏မစင်များကို အချိန်မီရှင်းလင်းပြီး trichomoniasis နှင့် colibacillosis ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွင် ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ။
1. မျိုးစိတ်ရွေးချယ်ပြီး အိမ်ဆောက်ပါ။
1. မျိုးရိုးရွေးချယ်ရာတွင် အများအားဖြင့် ဇာတိကြက်များ ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်တွင်းကြက်များသည် စျေးကွက်ဝယ်လိုအား ကြီးမားခြင်း၊ ကြီးထွားမှုအားကောင်းခြင်းနှင့် ရောဂါခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် ကြက်လှောင်ရုံကို စတင်တည်ဆောက်ပါ။ ကြက်လှောင်အိမ်သည် သွားလာရေး အဆင်ပြေ၊ ပေါ့ပါးပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေအောင် တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် ဆည်မြောင်း အဆင်ပြေစေရေး ကောင်းသောနေရာ။
2. အခြေအနေကောင်းရှိသော နေရာသည် ကြက်များ ကြီးထွားရန်အတွက်သာမက နောက်ပိုင်းတွင်ပါ အဆင်ပြေစေပါသည်။ အစာကျွေးခြင်း။နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ကြက်လှောင်အိမ်တွင် အနားယူခန်းရှိရန်၊ ပြင်ဆင်ပါ။အစာကျွေးခြင်း။ ကြက်များကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန်အတွက် ကျင်းများ၊ ရေလှောင်ကန်များနှင့် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ။
၂။ အစာကျွေးခြင်း။ ကြက်များ
1. ကြက်သားအခွံထွက်လာပြီး ရက်ပေါင်း 60 အတွင်းတွင် ကြက်သားအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤကာလအတွင်း ကြက်၏ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်သည် အတော်လေး အားနည်းနေပြီး ပထမ 10 ရက်အတွင်း အသက်ရှင်နှုန်းလည်း နည်းပါသည်။ ကြက်ကလေးများ၏ အပူချိန် လိုအပ်ချက်သည် အတော်လေး မြင့်မားသောကြောင့် အပူချိန်ကို ဦးစွာ ထိန်းချုပ်ရမည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ကြက်များ၏ အပူချိန် လိုအပ်ချက်များသည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါသည်။
2. ပထမ3ရက်တွင် အပူချိန် 35 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့် ထိန်းထားရန် လိုအပ်ပြီး3ရက်လျှင် 1°C ခန့် လျှော့ချပေးကာ ရက် 30 ခန့်အထိ အပူချိန် 25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့် ထိန်းထားကာ အားကောင်းစေရန်၊ နေ့အရွယ်အတွက် မွေးမြူသိပ်သည်းဆကို အစီအစဉ်ဆွဲပြီး ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း နေ့ရောညပါ အလင်းရောင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် သားပေါက်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ရက် 30 ပြီးနောက်၊ နေ့စဥ်အလင်းအချိန်ကို သင့်လျော်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
3. ငယ်ရွယ်သော ကြက်မွေးမြူခြင်း။
1. ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလသည် ကြက်များ ကြီးထွားမှု ပိုမိုမြန်ဆန်သော အဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤကာလအတွင်း သားပေါက်သည့်ကာလပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 90 အတွင်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ရက်ပေါင်း 120 အတွင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသော ကြက်များဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း ချဉ်းကပ်လာနိုင်ပြီး ကြက်ငယ်များကို ကြက်အိမ်တွင် ကျွေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင် ကြက်အိမ်တွင် ရေကျင်းတစ်ခုပြင်ဆင်ပြီး မိုးနှင့်ရေယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် အိမ်၏ထိပ်တွင် အမိုးအကာလုပ်ပါ။
2. ဘယ်တော့လဲ။ အစာကျွေးခြင်း။ ကြက်ငယ်၊ အထီး အမ တို့ကို သီးခြား မွေးမြူထားသင့်ပြီး အသားအားနည်း၍ သန်မာသော အစာအာဟာရကို ရှောင်ရှားကာ နေ့စဉ် ဆုပ်ကိုင်၊ အစာကျွေးခြင်း။ အသက်အရွယ်အလိုက် ပမာဏ။ အများအားဖြင့် အသက် ၆၀ မှ ၉၀ အတွင်း ကြက်များကို တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်ခန့် အစာကျွေးရန် လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာပြီးနောက်၊အစာကျွေးခြင်း။ ပမာဏကို တစ်ကြိမ် လျှော့ချနိုင်သည်။ မွေးမြူရေးသမားဆိုလျှင်၊အစာကျွေးခြင်း။ ပမာဏကို အကြိမ်တိုင်း အလွန်အကျွံ မစားသင့်ဘဲ၊ အလွန်အကျွံ မစားမိစေရန်အတွက် အသားတင်သည့် ကာလကို နှောင့်နှေးစေကာ အသားတင်နှုန်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။
1. မိရိုးဖလာ ကြက်များ၏ အဖြစ်များသော ရောဂါများတွင် အဓိကအားဖြင့် trichomoniasis၊ colibacillosis စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဤရောဂါများသည် ကြက်များ ကြီးထွားမှုကို အတော်လေး အန္တရာယ် ပေးနိုင်ပြီး ကြက်များ၏ ရှင်သန်မှုနှုန်းကို လျော့ကျစေပြီး မွေးမြူမှု၏ အမြတ်အစွန်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ၊ ကြက်ချေးကို နေ့စဉ်သန့်ရှင်းပေးပါ။
2. မွေးမြူရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို အားကောင်းစေကာ ကြက်အိမ်ကို ပုံမှန်ပိုးသတ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။ မွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မပြုလုပ်ရန် သတိပြုပါ။ အစာကျွေးခြင်း။ ပျက်စီးသောအစာနှင့် သောက် ရေ။ မွေးမြူသည့်အခါ မျိုးပွားမှုသိပ်သည်းဆကို စီစဉ်ပြီး ကြက်များ၏ ကြီးထွားမှုကို မကြာခဏ သတိပြုပါ။ အခြေအနေ မူမမှန်ပါက အချိန်မီ သီးခြားခွဲထားရမည်ဖြစ်ပြီး တိကျသောအခြေအနေကို စစ်ဆေးပြီးနောက် လက္ခဏာများကို ကုသပါ။